Critiano Ronalado « CR7 » milalao any amin’ny Juventus Italie ankehitriny dia naka tahaka ny nataon’i Jorge Mendes « agent de CR7 » kosa ka nanolotra fanomezana ho fanampiana ny hopitalin’i São João any Porto amin’ny ady atao amin’ity coronavirus ity. Marihana fa nividy aron’akanjo « blouses médicales » nahatratra 200.000 isa sy « masques » nahatratra 50.000 isa ho hampiasaina ao amin’ity hopitaly ity i Jorge Mendes. Fantatara fa any Madère Portugal miaraka amin’ny fianakaviany ankehitriny i Cristiano Ronaldo manara-maso ny fahasalaman-dreniny tapaka lalan-drà na voan’ny AVC “Accident Vasculaire Cérébral » rehefa niera tamin’ny Juventus. Tao amin’ny tambozotran-jotra seraserany kosa no nahitana an’i CR7 nizara savony ho an’ireo 3 amin’izy 4 mianadahy zanany ary nampianatra azy ireo hisasa tanana tsara amin’izao fihanaky ny coronavirus izao.
Marihana fa efa mahatratra 3 izao ireo mpilalao miaraka amin’i CR7 ao amin’ny Juventus no fantatra fa mitondra ny tsimokaretina covid-19 dia i Daniele Rugani sy Blaise Matuidi ary i Paulo Dybala.